साढे दुई खर्बको बजेट ल्याउँदै प्रदेश सरकार, कस्को बजेट कति ? - Aarthiknews
साढे दुई खर्बको बजेट ल्याउँदै प्रदेश सरकार, कस्को बजेट कति ?
काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आज असार १ गते सात वटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । सोही अनुरुप आज सातवटै प्रदेश सरकारले करिब साढे दुई खर्बको बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूले सार्वजनिक गर्ने उक्त बजेटको प्राथमिकता कोभिड नियन्त्रणका साथै शिक्षा, कृषि, रोजगारी तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण रहेको छ । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघ सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १५ गतेसम्म बजेट ल्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
संघीय सरकारबाट पाउने अनुदान र प्रदेशको आफ्नै स्रोत साधनबाट प्रदेश सरकारले बजेट तर्जुमा गर्ने गरेको छ । संघ सरकारबाट समानीकरण समपुरक, विशेष, सशर्त अनुदान प्रदेश सरकारलाई जाने गरेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले संघको जस्तै सातै प्रदेश सरकारका बजेटको प्राथमिकता पनि फेरिएका छन् । कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम र कार्यक्रमहरुलाई उच्च प्राथमिता दिई स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी सम्बन्धि कार्यक्रमहरु बजेटमा आउने केन्द्रीत हुने बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारको बजेट र संघ सरकारबाट प्रदेशमा जाने अनुदान
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरसले गरेको असर न्यूनीकरण गर्न केन्द्रित हुने गरी स्थानीय तहलाई अनुदान पनि दिने गरी प्रदेश सरकारले बजेट तयार पारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसारे कृषिमा सहुलियत कर्जा, स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नमा केन्द्रीत हुने प्रदेश १ का अर्थमन्त्री इन्द्रवहादुर आङ्बोले बताए । उनले भने ‘४० अर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा छौं ।’
प्रदेश २ ले आगामी आर्थिक वर्षको लागि करिब ३२ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । ‘बजेटमा अंक थपघट गर्ने, खर्च कटौती गर्ने तथा अत्यावश्यक क्षेत्रलाई समावेश गर्ने काम भइरहेको छ,’ प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठल भने ‘अहिलेको अवस्थालाई केन्द्रीकृत गरी बजेट आज ५ बजे आउँछ । हामी खर्चको जोडघटाउ गर्र्दै छौं ।’
वागमती प्रदेशले करिब ४७ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । बजेटको प्राथमिकतमा कोभिड–१९ को नियन्त्रणका साथै केही भौतिक पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्दै गरिबी निवारणमा केन्द्रीत हुने बागमती प्रदेशका मुख्य सचिव तोयम रायले जानकारी दिए ।
बजेटले स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश ५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । ‘बजेट निर्माण कार्य सकिसक्यो, दिउँसो ३ बजे बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ,’ उनले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्बको बजेट ल्याउँदैछ भने करिब ५ नम्बर प्रदेशले ३६ अर्बको हाराहारीमा, कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब र सुदूरपश्चिम करिब ३० अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । यो वर्ष कोभिडका कारण देशमा विषम परिस्थिति सिर्जना भएको र खर्चहरू कटौती गर्नु पर्ने भएको सबै प्रदेशको बजेटमा कटौती गरिएको छ ।
कति पाउँछन् प्रदेश सरकारले संघबाट अनुदान
आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले कुल ९९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् । प्रदेश १ ले १५ अर्ब ११ करोड, प्रदेश २ ले १३ अर्ब ४१ करोड, बागमती प्रदेशले, गण्डकी प्रदेशले १३ अर्ब ३६ करोड संघ सरकारबाट अनुदान पाउने छन् । त्यस्तै प्रदेश ५ ले १४ अर्ब ७ करोड, कर्णाली प्रदेशले १४ अर्ब ८४ करोड र सूदुरपश्चिमले १४ अर्ब २२ करोड बजेट अनुदान पाउने छन् ।